पर्साको नेपाल-भारत सीमामा कडाईः स्वास्थ्य परीक्षण र ट्राभल हिस्ट्री राखेर मात्र आउन पाइने - NepalTimes
पर्साको नेपाल-भारत सीमामा कडाईः स्वास्थ्य परीक्षण र ट्राभल हिस्ट्री राखेर मात्र आउन पाइने
१० चैत, काठमाडौँ । भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि नेपालमा फैलिन नदिन पर्सामा सतर्कता अपनाइएको छ ।
मंगलबार बसेको जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिले भारतबाट आउनेहरुलाई चेकजाँच गरेर र ट्राभल हिस्ट्री लिएर मात्र प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
जिल्लाको विभिन्न नाकाबाट अनधिकृत आवातजावत रोक्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीबाट सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै सीमा नाकामा तापक्रम नापेर ज्वरो आएका यात्रुहरुको एन्टिजिन टेस्ट गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिए ।
भारतबाट आउदा ट्राभल हिस्ट्रीसहितको अभिलेख राखेर मात्र प्रवेश गर्न दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
नेपाल प्रवेश गर्ने बेलामा कोरोनाको लक्षण देखिएकालाई आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल पठाउने र अरुलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने, कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखिएका राष्ट्रहरुको ट्राभल हिस्ट्री भएकालाई ७२ घण्टाभित्र आरडीटी/पीसीआर रिपोर्ट देखाएर प्रवेश अनुमति दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको प्रजिअ तामाङले बताए ।
नारायणी अस्पतालमा १५ शय्याको कोभिड आईसीयू सञ्चालन गर्ने, केस इन्भेष्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउने, सामुदायिक क्वारेन्टिन सञ्चलन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्ने, उद्योगहरुमा कार्यरत भारतीय कामदारहरु घर गई पुनः उद्योग फर्किदा अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने, रात्रीकालीन व्यवसाय राति ९ बजे बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक स्थानमा २५ जना भन्दा बढी सामूहिक भेला हुन निषेध गर्ने, सभा, जुलुस गर्न निरुत्साहित गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
नारायणी अस्पतालको तयारी
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने भन्दै नारायणी अस्पतालले पनि उपचारका लागि तयारी थालेको छ । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सञ्जय ठाकुरले संक्रमित संख्या बढे जनशक्ति अभाव हुने भएकाले होम आइसोलेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । हाल अस्पतालमा १० बेडको एचडीयु तयार छ, यसलाई २० बेडको बनाउने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
नाजुक अवस्थामा हेल्थ डेस्क
वीरञ्ज नाकामा विगतमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डाक्टरसहितको ८ जनाको दरबन्दीसमेत दिएको छ । तर चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी आएकै छैनन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा हेल्थ डेस्कका लागि आएको ५० लाख रुपैयाँ समेत खर्च हुन सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा टाँगिएको दुईवटा टेन्ट पनि धुलोले ढाकेको छ । जग्गा नहुँदा घर बनाउन नसकिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले बताए ।
मलेरिया जाँच गर्ने आरडीटी परीक्षण गर्ने र कोरोनाको एन्टिजीन टेष्ट गर्ने कर्मचारीसमेत हेल्थ डेस्कमा नभएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।
हेल्थ असिस्टेन्ट सनिउल्लाह हवारीका अनुसार हेल्थ डेस्कमा मन्त्रालयले पठाएका कोही पनि कर्मचारी आएका छैनन् । महानगरपालिकाले खटाएका उनी र अर्का एक जना स्वास्थ्यकर्मी नै खटिरहेको अवस्था छ ।
‘स्क्रिनिङको काम गरिरहेको छौं । धुलो धुवाँ नभनी खटेका छौं, तर जोखिम भत्ता समेत पाएका छैनौं’ उनले भने ‘अरु कोही आएका छैनन, विदा पनि नपाउने अवस्था छ ।’
स्वास्थ्यकर्मीले अझै पाएनन् तलब
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गण्डक अस्पताललाई अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाउँदा खटेका १३ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी कर्मचारीले अझै तलब पाउन सकेका छैनन् । अत्यावश्यक समयमा उनीहरुलाई नियुक्ति गर्दा कुन निकायले तलब सेवा सुविधा दिने भनेर निर्णय नगरेका कारण उनीहरु तलबबाट समेत वञ्चित भएका हुन् ।
उनीहरुले पाउनुपर्ने ७ लाख ३२ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ न नारायणी अस्पताल नै दिएको छ न त वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नै । महानगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाबाट पास गराएर दिने भनेको समेत लामो समय बितिसकेको छ ।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा पुगेका डा. उदयनारायण सिंहले ‘उतिबेला जसरी पनि कर्मचारी ल्याउनुस्’ भनेर व्यवस्थापन गरिएको तर अहिले तलब समेत खुवाउन नसक्दा आफू समस्यामा परेको बताए ।
गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पताल, महानगरपालिकाले आर्थिक भार बेहोर्ने र कर्मचारीको व्यवस्थापन नारायणी अस्पतालले हेर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नमान्दा काम रोकिएको बताए ।